Dowladda Soomaaliya oo weerar culus ku qaaday Kenya & xaaladda gobolka Gedo oo sii xumaanaysa.
January 31, 2021 Xuseen 2
Taliyaha Ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo kormeer ku sameeyey fariisimaha ciidanka xoogga ee duleedka degmada Beled-xaawo ayaa mar kale dowladda Kenya ku eedeeyey in ay colaad ka hurineyso gobolka Gedo.
Taliyaha waxaa uu sheegay in dowladda Kenya ay maleeshiyaad ku aruurineyso duleedka Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo, iyaga oo doonaya inay carqaladeeyaan amniga kajira Gobolkaas.
Waxaa uu ku eedeyay Guddigii xaqiiqo raadinta ahaa ee ka tirsan IGAD ee dhawaan gudbiyay Warbixinta inay iska indha-tireen xaaladaha kajira Gobolka Gedo, waxaana uu sheegay in Warbixintaas ay tahay mid Madaxweynaha Jabuuti uu ku doonayo in uu ku dheereesto xukunka.
“ Waxaa ayaan darro ah maanta waxa cad oo meeshaan ka muuqda in ciidankii Siliga kasoo gudbay oo madaafiicda soo ridaya oo Xerada ciidanka Kenya ku dhex-jira in Madaxweynaha Jabuuti u yiraahdo Soomaaliya ayaa gardaran, Shacabka Soomaaliyeed u sheegaya in Shacabka Jabuuti ay yihiin Walaalaheen raali kama ahana waxa lagu hadalay waxaa ay khaas ku tahay siyaasadda Ismaaciil Cumar Geelle uu ku dherer sananayo xukunka ayuu yiri” Taliyaha
Hhhhhhhhh, war kan la yiriih tahliil bixi yaa naga aamusiya xooloha inan GUMEEDka ah . Cuuuc iyo caaac waxba sheegi meyso ciidanka Cabdi JANAN kuma jiraan xadka kenya waxeey ku jiraan xadka-baladxaawo waana kun iyo boqol OROD aad waxaa xaqiiqa ah in farmaajo ciyaal faa-cali iyo mooryantisa haramcad iyo gorgor aysan sii joogeyn GEDO waayo ciida ayaa ka hiilineysa dagaalkii gedo haduu sifiican u bilaaban
Xaarmaajo,,, in uu caqli xun yahay , talo aanu hayn waxaad ku garan. waxa ay ahayd in uu kan La yidhaahdo Janan in uu la la hadlo ku yidhaado . Buulo Xaawo , adigaa xukuma , Bil sharuuud ,,,wax buuq & qaylo ah yaanan ka maqal Gedo & garbahaaray .